‘ओमिक्रोन’ देखिएसँगै लकडाउन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको संकेत ! « On Khabar
‘ओमिक्रोन’ देखिएसँगै लकडाउन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको संकेत !
काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएसँगै पुनः लकडाउन हुने हो कि भन्ने चासो सामाजिक संजालमा फैलिएको छ । सर्वसाधारणले यसबारे व्यापक टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । यसअघि दुईपटक मुलुकमा लकडाउन भैसकेको छ ।
नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएसँगै नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले चुस्तरुपमा तयारी गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सह–प्रवक्ता डा। समीकुमार अधिकारीले तत्काल लकडाउन गर्ने वा नगर्नेबारे कुनै निर्णय नभएको बताए ।
सरकारले तेस्रो लहरको सम्भावित जोखिमबाट बच्न के गर्छ ‘के फेरि लकडाउन वा निषेधाज्ञा हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालयले लकडाउन गर्ने वा नगर्नेबारे कुनै छलफल वा निर्णय नभएको बताए । तर उनले ओमिक्रोन व्यापक हुन नदिन लकडाउनेनै अन्तिम विकल्प रहेकोतर्फ संकेत गरेका थिए ।
‘अहिले नै लकडाउन वा निषेधाज्ञाबारे कुनै निर्णय भएको छैन। परीक्षण, निगरानी र खोप नै पहिलो प्राथमिकता हो,’ अधिकारीले भने । आफू यतिबेला अस्पताल व्यवस्थापनमा जुटेको उनले बताए ।सरकारले ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएका चीनको हङकङको राज्य र दक्षिण अफ्रिकासहितका ९ मुलुकबाट नेपाल आउन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । भारतबाट आउनेलाई अनिवार्य ७ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने निर्णय पनि छ ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई तथा स्थल नाकाहरूमा यात्रुहरूको आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न नेगटिभ पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ । पूर्ण मात्रा खोप नलगाएका र शंकास्पद सबै यात्रुहरुको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरिएको छ।
एन्टिजेन परीक्षणमा फेला परेकाहरूको नमुना संकलन गरी पीसीआर परीक्षण गर्ने र संकास्पद नमुनाहरूको जीन सिक्वेइन्स गर्ने गरिएको छ । यसका साथै एक महिनादेखि पोजिटिभ भएका नमुमनाहरूको समेत थप परीक्षण गर्ने काम भइरहेको डा। अधिकारीले बताए।